Ahoana ny fizarana horonan-tsary ho fizarana maromaro: fandaharana samihafa sy fampianarana fohy | Famoronana an-tserasera
Isan'andro ny asan'ny fanovana horonan-tsary dia mihamitombo hatrany amin'ny fitakiana studio maro. Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity, namorona torolalana izahay raha mbola tsy manam-pahaizana amin'ny sehatry ny audiovisual ianao, izay hampianatra anao amin'ny fampianarana fohy hizarana horonan-tsary ho faritra samihafa.
Asa izay, amin'izao fotoana izao, amin'ny tetikasa fanovana maro, dia niasa tsy tapaka satria mifototra amin'ny maha-zava-dehibe azy ho an'ny tetikasa izay manomboka amin'ny sarimihetsika, bilaogy amin'ny Internet, toerana fanaovana dokam-barotra, video fampianarana momba ny lohahevitra iray manokana, sns.
1 Fanovana horonan-tsary
2 Zarao ho fizarana maromaro ny horonan-tsary
2.1 Dingana 1: apetraho ny programa
2.2 Dingana 2: Fidio ny video
2.3 Dingana 3. Hetezo ny horonan-tsary ary esory ny fizarana
2.4 Dingana 4. Tehirizo ireo horonan-tsary voaova
3 Programa hafa
Ny fanovana video dia voafaritra ho dingana iray ahafahan'ny mpanonta iray mamorona horonan-tsary avy amin'ny horonan-tsary marobe, sary, lohateny ary feo na mozika.
Mandritra ny fanitsiana horonan-tsary dia angonina ny fitaovana rehetra amin'ny feo, sary, sary mihetsika, ary izay endrika sary hafa rehetra, ary mifangaro amin'ny feo mba hamoronana horonantsary tokana miaraka amin'ny atiny rehetra.
Betsaka ny programa manampy amin'ny fizotry ny fanitsiana horonan-tsary noho ny isan'ny vokatra misy azy.
Zarao ho fizarana maromaro ny horonan-tsary
Amin'ity ampahany amin'ny lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba tsotra sy haingana indrindra amin'ny fomba fisarahana video isika. Mba hanombohana dia zava-dehibe ny fametrahanao ny fampiharana Movavi. Movavi dia tonian-dahatsoratry ny horonan-tsary ahafahantsika manodinkodina horonantsary amin'ny fomba samihafa noho ny fitaovana atolony.
Dingana 1: apetraho ny programa
Alohan'ny hanombohanao dia zava-dehibe ny misintona ny mpamoaka horonantsary. Ampandehano ny rakitra setup ary apetraho ny programa amin'ny alàlan'ny fanarahana ny toromarika izay hiseho eo amin'ny efijery rehefa vita ny fametrahana azy. Movavi Video Editor Plus dia manana interface intuitive sy tsotra, ao anatin'ny dimy minitra dia ho fantatrao ny fomba fampiasana ilay programa. Azonao atao ny mampiasa ity lozisialy ity mba hizarana sy hanatevin-daharana ireo horonan-tsary, na hanao asa fanovana hafa.
Dingana 2: Fidio ny video
Tsindrio Manampia rakitra ary safidio ny horonan-tsary tianao hampidirana dikanteny. Ny lahatsary dia hiseho ao amin'ny Media Bin. Avy eo, tariho ny clip ary apetraho eo amin'ny Timeline.
Dingana 3. Hetezo ny horonan-tsary ary esory ny fizarana
Mba hizarana ny horonan-tsary ho fizarana roa, tsindrio voalohany eo amin'ny fizotry ny fotoana ary afindrao ny marika mena amin'ny teboka amin'ny horonan-tsary izay tianao hanapahana azy. Azonao atao ihany koa ny mahita ampahany manokana amin'ny horonan-tsary amin'ny alàlan'ny filalaovana azy eo amin'ny varavarankely preview. Avy eo tsindrio ny kisary hety ary hizara roa ny horonan-tsary.
Hanapaka sombin-dahatsary tsy ilaina, apetraho eo am-piandohan'ny sehatra tsy ilaina ny marika mena ary tsindrio ny kisary hety. Avy eo dia afindrao ny marika mena mankany amin'ny faran'ny ampahany tsy ilaina ary zarao indray ilay clip. Ankehitriny ity fizarana ity dia hisaraka tanteraka amin'ny ambiny amin'ny horonan-tsary ary ny sisa tsy maintsy atao dia ny mamafa azy amin'ny fipihana Delete.
Dingana 4. Tehirizo ireo horonan-tsary voaova
Kitiho ny Export ary safidio ny endrika ho an'ny horonan-tsaryo ao amin'ny tabilao eo amin'ny ilany havia amin'ny varavarankely mipoitra. Azonao atao ny misafidy izay endrika horonan-tsary, toy ny AVI, MPG, 3GP, MKV, WMV, MP4, FLV na MOV, ary tehirizo ho video HD koa ny rakitrao. Manaraka, manondro ny toerana misy ny lahatahiry ao amin'ny Save in saha ary tsindrio Start.
Clipchamp dia mpanonta, Video mpanova sy compressor, ao anatin'ny iray ihany, izay manana webcam sy firaketana efijery ihany koa, mpamorona doka ho an'ny Facebook ary vahaolana fampiakarana samihafa, manomboka amin'ny horonan-tsary ho an'ny fantsona YouTube na Vimeo anao, mankany amin'ny horonan-tsary fampiroboroboana ho an'ny Instagram.
Mamela anao hanova ny endrik'ireo rakitra ao amin'ny navigateur ary hitahiry azy mivantana ao amin'ny solosainao. Tsy tafiditra amin'izany ny fampidinana na fampiakarana rakitra. Miaro ny fiainanao manokana izany ary miantoka fa tsy zaraina amin'ny antoko fahatelo na oviana na oviana ny rakitrao raha tsy misafidy ny hanao izany ianao. Ankoatra izany, mitahiry bandwidth ianao ary mampakatra ny fotoana. Azonao atao ihany koa ny manondrana azy ireo amin'ny fanapahan-kevitra samihafa.
Loharano: Miranda Group
Corel dia tonian-dahatsary tena intuitive ho an'ny matihanina, izay misy fiantraikany sy fitaovana marobe hanatsara ny vokatrao.
Anisan'ny fampiasa azy, asongadinay ny fanapahana sy ny fanovana, vokatra hita maso mandroso, fandraketana ecran, horonan-tsary ifanakalozan-kevitra, maodely ary fitaovana intuitive izay ahafahanao mamorona na inona na inona manomboka amin'ny sarimihetsika ka hatramin'ny horonan-tsary tsotra na sary mihetsika ary ny mety ho atambatra amin'ny tonian-dahatsoratry ny sary avo lenta misy eo amin'ny sehatra iray ihany.
DaVinci dia fampiharana fanitsiana horonan-tsary tsy tsipika, na dia fanitsiana loko aza no tena fampiasana azy. Manana mody maromaro izy io, samy manana fitaovana manokana sy toeram-piasana ho an'ny sehatra iray manokana: fanitsiana horonan-tsary, fanitsiana loko, fampifangaroana ny vokatry ny feo/peo sy ny vokatra hita maso, ny fampitam-baovao sy ny fandefasana miaraka amin'izay rehetra ilainao hanafatra, handaminana ary hanaterana tetikasa.
Izy io dia manana interface tsara mora ampiasaina, mety ho an'ny vao manomboka, saingy ampy ho an'ny matihanina ihany koa.
Ny Final Cut dia lasa iray amin'ireo fandaharana malaza amin'ny resaka fanovana video matihanina. Ity lozisialy Apple ity dia ahafahan'ny mpampiasa mirakitra sy mamindra horonan-tsary amin'ny kapila mafy anatiny na ivelany, izay ahafahana manitsy, manodina ary manondrana azy amin'ny endrika isan-karazany.
Ny interface tsotra dia manana varavarankely efatra izay ahafahanao mikaroka, mijery, mandamina ary manova clips samihafa ary misintona azy ireo mankany amin'ny tsipika. Ahitana fifindrana, sivana horonan-tsary sy feo, ary fanitsiana loko.
FlexClip dia tonian-dahatsary tsotra an-tserasera izay ahafahanao mamorona karazana horonan-tsary ao anatin'ny minitra manomboka amin'ny maodely efa nomanina mialoha na avy amin'ny scratch: ho an'ny tambajotra sosialy rehetra, ho an'ny vaovao, orinasa, fihaonan'ny fianakaviana, fitsangatsanganana, ankoatry ny maro hafa. Manana tranomboky fampahalalam-baovao midadasika misy sary tahiry, horonan-tsary ary mozika tsy misy mpanjaka izy io.
Anisan'ireo fiasa izay misy azy ny cropping, audio sy video effects, voiceover ary watermark. Azonao atao koa ny manampy singa mihetsika toy ny lahatsoratra mavitrika, overlay, widgets, logos, meme, gif, sns. Izy io dia manohana ny firaketana efijery sy ny mpanova horonan-tsary.
Fampiharana Apple maimaim-poana hafa izy io, mifanaraka amin'ny iOS sy macOS, izay ahafahanao mamorona horonan-tsary misy vokatra tsara. Ny fitaovana koa dia manampy anao hanao tranofiara ho an'ny vokatrao.
Tsotra be ny fizotran'ny famoronana: safidio ny horonan-tsary sy sary tianao hampiasaina, ampio lohateny, mozika ary effet-feo (misy rindran-peo maherin'ny 80), mamorona feo, misafidiana amin'ireo sivana video 13 ary zarao amin'izay tianao amin'ny sehatra rehetra. . Azonao atao ny manamboatra ny famoronana avy amin'ny fitaovana Apple anananao ary manokatra ny tetikasa amin'ny Final Cut ihany koa.
Inshot dia a fampiharana finday fanovana sary sy horonan-tsary tena tsotra ampiasaina, maimaim-poana ary mifanaraka amin'ny Android sy iOS.
Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao ny manapaka, manitsy ary mamerina sary sy horonan-tsary, haingana sy mora. Ny endri-javatra amin'ny horonan-tsary dia misy: lahatsoratra, sivana, trim, split, duplicate, flip, manamaivana ny ampahany amin'ny clip, manampy na manova background, manova ny hafainganam-pandehan'ny feo sy ny volume, manindry sy mamadika horonan-tsary, manambatra clip maro ho iray, ary manondrana nefa tsy very kalitao. hizara izany amin'ny Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube na TikTok amin'ny tsindry iray monja.
Maimaim-poana izany, fa raha manondrana horonan-tsary isika, dia hatsangana ho azy ny mari-drano misy ny logo InShot. Raha te hisoroka azy tsy hiseho ianao dia tsy maintsy mandoa ny dikan-teny feno, izay manome fidirana amin'ireo endri-javatra mandroso ihany koa.
Kdenlive dia tsy iray amin'ireo mpamoaka horonantsary malaza indrindra, fa iray amin'ireo maimaim-poana tsara indrindra ary noho izany dia heverinay fa mendrika hotononina izany. Izy io dia rindrambaiko fanontana horonan-tsarimihetsika tsy an-tariby Open Source, izany hoe loharano misokatra izay mifototra amin'ny MLT Framework, izay noforonina ho an'ny Linux tamin'ny 2003 tany am-boalohany.
Izy io dia mifanaraka amin'ny Mac OS sy Windows amin'izao fotoana izao ary manolotra fanohanana ho an'ny endrika rehetra. Izy io dia ahitana fandaharam-potoana misy rindran-peo sy horonan-tsary maro, fandaharana azo zahana, ary fiantraika feo fototra sy fifindrana.
Miaraka amin'ity mpanonta ity dia afaka mitantana mivantana izay endrika audio na horonan-tsary ianao, tsy mila mamadika na mametaka indray ny clip na ny sombinao. Ho fanampin'izay dia ahafahanao mampiasa sy mandamina fantsona horonan-tsary sy feo maro, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia azo sakanana na ampangina arakaraka ny filanao.
Mamorona ho azy ireo dika mitovy amin'ny loharanon-tsarimihetsika ambany kokoa mba hamela anao hanitsy amin'ny solosaina rehetra, ary any aoriana fanondranana fanondranana amin'ny vahaolana avo lenta.
Betsaka ny programa fanovana noforonina mba hanamora kokoa ny asa. Izany no antony antenainay fa nanampy anao tamin'ity fikarohana programa ity sy tamin'ny torolàlana kely natolotray anao izahay.
Manasa anao izahay hanandrana misintona ny sasany amin'ireo programa ary hanomboka ny aventure ho mpamoaka horonantsary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fizarana horonan-tsary ho fizarana maromaro